Shiinaha 99% budada CPC Cetylpyridinium chloride cas 123-03-5 Hexadecylpyridinium chloride warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
Cetylpyridinium chloride / CPCbudada waa isku-darka ammonium-ka quaternary waana kiimikada firfircoon ee ku jirta maydhashada dadka ee suuqa. Waxay leedahay waxyaabo sunta lagu buufiyo waxaana loo isticmaalaa xalalka ama lozenges lagu daaweeyo infekshannada yaryar ee afka iyo cunaha. Waxqabadka antimicrobial wuxuu sabab u yahay isdhexgalka ions cetylpyridinium aasaasiga ah ee molecules acidic on bakteeriyada, taas oo markii dambe xakameyneysa dheef-shiid kiimikaad iyada oo la sameynayo iskudhafyo daciif ah oo ionic ah oo farageliya neefsashada bakteeriyada.
Cetylpyridinium chloride CAS 123-03-5 waa nooca cusbada chloride ee cetylpyridinium, ammonium afar geesle ah oo leh firfircooni ballaaran oo antimicrobial ah. Marka la eego maamulka maadada, cetylpyridinium chloride ayaa si togan loo eedeeyaa oo la falgala dusha sare ee unugyada microbial cell, taas oo markaa baabiinaysa sharafta xuubka unugga. Tani waxay keenaysaa baxsiga qaybaha intracellular ee keena dhimashada unugyada microbial.
Cetylpyridinium chloride CAS 123-03-5 waa cusbo pyridinium ah oo leh N-hexadecylpyridinium oo ah kansarka iyo chloride sida anion. Waxay leedahay waxyaabo sunta lagu buufiyo waxaana loo isticmaalaa xalalka ama lozenges lagu daaweeyo infekshannada yaryar ee afka iyo cunaha. Waxay leedahay door ahaan daroogada sunta dila iyo wax soosaaraha. Waa cusbo chloride iyo cusbo chloride dabiici ah. Waxay ka kooban tahay cetylpyridinium.
Cetylpyridinium chloride CAS 123-03-5 waxaa lagu soo bandhigi karaa cabir ganacsi iyadoo lagu qiimeynayo tartan.
Cetylpyridinium chloride waa xayndaab ammonium ah oo ka kooban waana firfircoon kiimikada ku jirta aadanaha qaarkood
maydhashada afka. Waxay leedahay astaamo jeermis dilaa ah waxaana loo isticmaalaa xalka ama lozenges ee daaweynta
infekshannada yaryar ee afka iyo cunaha. Waxqabadka antimicrobial waxaa sabab u ah isdhexgalka aasaasiga ah
ion cpylpyridinium oo leh meyrooleyaal acidic ah oo ku jira bakteeriyada, taas oo markii dambe wuxuu joojiyaa dheef-shiid kiimikaadka
iyadoo la sameynayo iskudhafyo ionic daciif ah oo farageliya neefsashada bakteeriyada.
Biraha culus （Pb）
Xalka cad & midabka
1kg / bac, 5kg / kartoon, 10kg / kartoon, 25kg / kartoon
Daawada Dihydrogenated Tallow Dimethyl Ammonium Chloride D1821 CAS 107-64-2
Hore: Dareeraha 30% LDAO Lauryl dimethyl amine oxide CAS 1643-20-5
Xiga: 100% Alpha Pinene dabiici ah oo saafi ah CAS 7785-26-4 badan
Tayo sare leh Dodecyl dimethyl Betaine / Lauryl b ...
Tayo sare leh Lauryl amido propyl betaine CAS 42 ...
Qiimo wanaagsan Oleyl dimethylamine cas 28061-69-0
Oleamidopropyl betaine cas oo tayo sare leh 25054-76-6
Tayo sare 99% Dipropylenetriamines cas 56-18-8
Tayo sare N, N-Dimethyldecylamine cas 1120-24-7